Shiinaha Nooca Aamusnaa ee Jabiyaha Haydarooliga LBS85 warshad iyo soosaarayaasha | Shengda
Alaabooyin muuqaal ah
Nooca Sare ee Burburka Kumbiyuutarka LBS100
Nooca Aamusnaa ee Jabiyaha Kumbiyuutarka ee LBS140
Nooca Aamusnaa ee Jabiyaha Kumbiyuutarka ee LBS100
Nooca Side Haydarooliga Jabiyaha LBS195
Nooca Side Haydarooliga Jabiyaha LBS185
Nooca Side Haydarooliga Jabiyaha LBS135
Nooca Dhinac Kaydiyaha Kumbiyuutarka1 LBS75
Nooca Sare ee Burburiyaha Haydarooliga LBS68
Nooca Aamusnaa ee Jabiyaha Kumbiyuutarka ee LBS85
Nooca Side Haydarooliga Jabiyaha LBS45
Tikniyoolajiyadda qaylada oo hooseysa
Naqshaddii ugu dambeysay, ka hortagga gariirka saxanka
Qaab dhismeedka xiran, ilaalinta wanaagsan ee jirka ugu weyn
LBS aamusiyaha nooca jebinta wuxuu adeegsadaa nidaamka wareegga saliidda ee horumarsan, oo muujinaya adeegsiga saliidda oo yaraada, hagaajinta habboon iyo waxtarka shaqada sare. Qalabka oo dhan ayaa sidoo kale leh d
Noo soo dir email U soo dejiso sida PDF
Nooca Aamusnaanta Qalabka Kumbiyuutarka (Nooca Sanduuqa)
• Tikniyoolajiyadda qaylada oo hooseysa
• Naqshaddii ugu dambaysay, ee ka hortagga gariirka saxanka
• Qaab dhismeedka xiran, difaac fiican u ah jirka weyn
LBS aamusiyaha nooca jebinta wuxuu adeegsadaa nidaamka wareegga saliidda ee horumarsan, oo muujinaya adeegsiga saliidda oo yaraada, hagaajinta habboon iyo waxtarka shaqada sare. Qalabka oo dhan ayaa sidoo kale leh naqshad casri ah, qaab-dhismeed fudud, qaybo yar, heerar dhib yar iyo dayactir fudud.
Faa'iidooyinka soo saaraha:
1.Hor u eegid is-baaris ah oo loogu talagalay qaybaha dayactirka badankood.
2.Ha leedahay qalabka wax soo saarka iyo kormeerka ugu horumarsan, waqtiga dhalmada oo gaaban
3. kormeerka tayada nidaamka adag, tijaabiso wax soo saar kasta ka hor rarka
Nidaamka xakamaynta tayada oo dhammeystiran, ISO9001: 2015
5.Product waxay la kulantaa heerarka Yurub, oo leh shahaadada CE.
6. Muddada damaanad qaadka waa hal sano. Waxaan kuu balanqaadeynaa jawaabta saacadda iyo afar iyo labaatan saac si aan u xallinno. Haddii loo baahdo, waxaan u dirnaa shaqaale farsamo si ay u xalliyaan dhibaatada.
1.Waxaan doorannaa qalabka ugu fiican: 40CrNiMo, 20CrMo, 42CrMo
2.Kadib tignoolajiyada daaweynta kuleylka. Waxaan leenahay aqoon isweydaarsi ku saabsan daaweynta kuleylka iyo daaweynta kuleylka 10 sano
3.Waxaan haysannaa injineerada heerka-koowaad, inta badan shaqaalaheennu waxay leeyihiin khibrad ka badan 5 sano
Huaian Shengda Makiinado waxaa la aasaasay sanadkii 2009, shirkadeenu waxay daboolaysaa aag dhan 30000. Waxaan inta badan ku howlan nahay R&D, wax soosaarka iyo iibinta mashiinnada kala gooya Haydarooliga. Iyada oo khibradeena badan iyo xubnaha hawl karka ah iyo hawlkarnimada leh, waxaan la kulmi karnaa shuruudo kala duwan oo noocyada macaamiisha ah. Waxaan diiwaangelinay sumadeena "LBS". Waxyaabaha LBS Brand waxay leeyihiin faa'iidooyinka dayactirka hooseeya, nolosha shaqada dheer, iyo astaamaha cusub. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, shirkaddayadu waxay sii waday qiimeynta alaab-qeybiye la isku halleyn karo oo tayo sare leh SANY, XCMG iyo shirkado badan oo caan ku ah qodista qodista.
Goobta Asalka Jiangsu, Shiinaha (Dhul Weyn)
Magaca Sumadda LBS
Lambarka Moodalka LBS85
Nooca Nooca Sanduuqa Nooca Mashiinka Kumbiyuutarka
Midab Jaale ama Baahida Macaamiisha
Codsiga Macdanta, Quarry, iyo Dhismaha
Damaanad 12 bilood
Dhexroor qalab 85 mm
Bistoolad bir daawaha tayo sare leh
CQC ISO9001: 2015
Cadaadiska saliidda ee hawlgalka
130 ~ 150
Socodka saliida loo baahan yahay
1 / daqiiqo
45 ~ 85
Saamaynta inta jeer
480 ~ 850
6.0 ~ 11.0
0.25 ~ 0.45
Xirxirida iyo rarka
Xirxirida:Hal xirmo oo dhoofinta caadiga ah Hal unug oo ku jira bacda wax lagu keydiyo, ka dibna ku rida sanduuqa qoryaha badan. Xirmo kasta waxaa ku jira kaabayaasha soo socda: laba shey, laba tuubbo, hal go 'oo ah dhalada N2 iyo qiyaasta cadaadiska, hal xirmo xirmo dheeri ah, hal sanduuq qalab oo leh qalab dayactir lagama maarmaan ah iyo buugga hawlgalka sidoo kale
Su'aal iyo Jawaab
S: Ma waxaad tahay soo saare?
J: Haa, warshaddeena waxaa la aasaasay 2009.
S: Ma hubtaa in badeecadaadu ay ku habboon tahay qodiskayga?
J: Qalabkeenu wuxuu ku habboon yahay inta badan qodista qodista. Na tus tusaalahaaga qodista, waanu xaqiijin doonaa xalka.
S: Wax ma soo saari kartaa iyadoo loo eegayo nashqadda macaamiisha?
J: Hubaal, adeegga OEM / ODM waa la heli karaa. Waxaan nahay soo saare xirfad leh.
S: Sidee ku saabsan waqtiga dhalmada?
J: 5-25 maalmood oo shaqo kadib bixinta.
S: Sidee ku saabsan xirmada?
J: Qalabkeena oo lagu duubay filim fidsan, oo ay ku jiraan sariirtaada ama kiiska polywood; ama sida la codsaday.
Hore: Nooca Side Haydarooliga Jabiyaha LBS45
Xiga: Nooca Sare ee Burburiyaha Haydarooliga LBS68
Dubbe Haydarooliga Jabiyaha iibiya
Jabiyaha Haydarooliga Jack Hammer
Mashiinka Jabinta Kumbiyuutarka
Qaybaha Dayactirka Haydarooliga
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2019: Dhammaan xuquuq dhowran.